Joe Biden oo loo cumaaday Madaxweynaha 46aad ee Maraykanka + Taariikh nololeedkiisa - SomalilandPost
Home News Joe Biden oo loo cumaaday Madaxweynaha 46aad ee Maraykanka + Taariikh nololeedkiisa
Joe Biden oo loo cumaaday Madaxweynaha 46aad ee Maraykanka + Taariikh nololeedkiisa
Washington (SLpost)- Joe Biden ayaa si rasmi ah u noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, kaddib markii caawa loo dhaariyay xilka.
Xaflad ay dad yar ka qeyb galeen oo ka dhacday xarunta Capitol ayaa Mr Biden xilka loogu wareejiyay.
Waxaa sidoo kale xilka madaxweyne ku xigeenka loo dhaariyay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee abid jagadaas loo dhiibo, sidoo kalena ah madow.
Inta uu khudbaddiisa waday wuxuu ka qeyb galeyaasha ka dalbaday in daqiiqad aamusnaan ah lagu qaddariyo dadkii u dhigtay cudurka Covid-19.
Waxaa Biden hadda laga dhowrayaa inuu guda galo shaqooyin badan oo sugaya.
Waa Kuma Joe Biden?
Biden waa ninka tartanka adag la galay Donald Trump, wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladdii Obama, siddeedii sano ee hoggaanka Mareykanka uu hayay.
Waa siyaasi ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka, kaas oo Donald Trump uga guuleystay doorashada, wuxuuna noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka.
Eedaymaha loo jeediyey
Biden oo eedeymahaas ka jawaabayay wuxuu ballan qaaday “in uu noqonayo qof feejigan” marka uu dadka la kulmayo